XOOLAHA SOOMAALIYEED OO LAGA SOO BAARAYO CUDURKA " RIFT VALLEY FEVER "
Waxaa mustaqbalka dhow la filayaa inuu dalkeena tago wefdi ka kooban saraakiil sare oo ka kala socda Wasaaradda Beeraha iyo Kheyraadka Badda iyo Agaasinka Guud ee kulmiya Dawladaha Hoose ee Imaaraadka Carabta, si ay u soo baaraan in Xoolaha Soomaaliyeed ay ka bad-qabaan cudurka xummadda " Rift Valley " iyo in kale ,iyadoo uu hogaaminayo wefdigaas Engineer Abdalla Juma.
Sida la ogsoon yahay, tan iyo markii lagu arkay cudurkan meelo ka mid ah Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Yaman sanadkii tagay, waxaa xayiraad lagu soo rogay soo dhoofinta hilibka qallan iyo xoolaha nool ee Soomaaliyeed oo runtii ahaa laf-dhabarka dhaqaalaha iyo isha uga weyn ee dalka ka soo gasho lacagta adag, taasna waxay dhaawac weyn u geystay dhaqaalaha xoolaleyda iyo ganacsataduba, iyadoo ay xayiraadaas Soomaaliya ku wehliyaan dalal badan oo yaala bartamaha iyo geeska Afrika .
Wefdigaas oo iminka ka baaraya isla cudurkan " Rift Valley Fever" xoolaha nool ee dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waxaa inay booqdaan Soomaaliya waqtigan adag ee xasaasiga ah dowr weyn ka geystay kaalinta xoolaha Soomaaliyeed kaga jireen suuqyada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo dhadhanka macaan ee looga bartay hilibka Soomaaliyeed iyo iyadoo shaki laga qabay in xoolaheena bukaanba.Waxaa kaloo xusid mudan dadaalka ay xaqiijinta arinkan ugu soo galeen madax ka mid ah Dawladda KMG oo la qaabilay iyo Maamulka Safaaradda Soomaalida ee Imaaraadka iyo xubno ka mid ah ganacstada Soomaaliyeedba.
Sida laga warqabo waxay Dawladda Imaaraadka , iyadoo tixgelineysa codsiga dawladda KMG,dhowaan joojisay dhuxusha laga keeni jiray Soomaaliya.
Waxayna taas ka danbeysay kadib markii uu Wasiir Ku-xigeenka Horumarinta Reer Miyiga kaga qaybgalay shirkii Bey'adda Carabta ee 2001 oo lagu qabtay Abu-Dhabi 4-8da February ee sanadkan .
Inkastoo ay iminka ina gudubtay fursad qaali ah oo ku aaddanayd munaasabadda Ciidda Carafo oo dalalka khaliijka guud ahaan iyo gaar ahaan Boqortooyada Sacuudiga oo xoolo badan loo soo dhoofiyo xajka awgiis, hadana in xoolaha Soomaaliyeed caafimaadqab loogu tago oo xayiraadda laga qaado ayaa wax walba ka weyn .